Zavatra 21 Tokony ho Fantatry ny rehetra momba ny fiainana - Blog
Raha misy olona te hahazo fahazoan-dàlana hamily fiara, ho mpitan-kaontim-panjakana voamarina, na lalàna fampiharana, dia tsy maintsy mandalo fitsapana izy ireo. Ny fitsapana dia manamarina fa farafaharatsiny farafaharatsiny mahafeno fepetra izy ireo handroso.
Ahoana anefa raha misy fitsapana ho mampihatra ny fiainana?
Fitsapana nomena mba hanondroana ny fahavononany hiatrika ireo andraikitra sy fanambin'ny fiainana.
Inona no ho tafiditra ao anatin'izany fitsapana izany? Inona no tokony ho fantatrao mba hahazoanao ny tifitra tsara indrindra amin'ny fiainana misy dikany?
Ahoana raha misy kilasy hariva azonao raisina hanampiana anao hahita ity fitsapana ity? Hanao ahoana ny syllabus? Angamba zavatra mitovy amin'ny lisitra etsy ambany.
Ireo no zavatra tokony ho fantatrao hanararaotra ny androm-piainana.
Ity syllabus kilasy ity dia tsy afaka manarona ny zava-drehetra, saingy manarona ampy mba hahafahanao mandalo ny fitsapana ny fiainana amin'ny loko manidina.
1. Tsy hisy ho afaka amin'ity fiainana ity ho velona.
Ny zavatra voalohany tokony ekentsika dia izany voafetra ny fiainana.
Betsaka ihany ny andro nomena antsika. Andro iray dia hifoha maraina isika ary hanomboka ny andro farany eto an-tany.
Ny fanekena fa mihelina ny fiainana dia fomba hendry hanatonana ny fiainana. Hanampy anao hiaina isan'andro bebe kokoa izany, ary hifantoka amin'izay zava-dehibe indrindra.
2. Tsy azo vinavinaina ny fiainana, fa ny drafitra dia hevitra tsara.
Tsy misy afaka maminavina ny ho avy - ny azy manokana na ny olon-kafa. Ny fisehoan-javatra sy ny traikefa izay tsy hitantsika mialoha dia hitranga matetika.
Saingy ny drafitra voalamina tsara dia afaka manampy antsika hivezivezy amin'ny rano tsy fantatra mialoha.
Eritrereto ny drafitra iray a ho avy tianao . Tsy fiantohana ny vokatra azo io, fa ny drafitra afaka manala ireo sakana maro amin'ny hoavintsika irina.
Ny fitondrana elo dia tsy hisorohana tafio-drivotra, fa kosa afaka mampihena ny vokatry ny tafiotra.
Manaova drafitra. Ary manantena ny hamerina hijery azy io indraindray.
3. Ny finamanana lehibe dia manatsara ny kalitaon'ny fiainana.
Hihaona amin'ny olona maro izahay mandritra ny androm-piainantsika. Ny sasany dia ho mpiara-dia lavitra mandritra ny dia ihany. Ny hafa tianay hiaraka aminay mandritra ny dia manontolo.
Ny fisakaizana lalina sy maharitra dia tsy mitranga fotsiny. Mitaky fifantohana, angovo, faharetana ary fahaizana izy ireo mba hamoronana sy hitazomana.
Saingy, zazalahy, mendrika izany izy ireo.
tsy tiako ny olona amin'ny ankapobeny
Ry namana tsara dia hanatsara ny dianao amin'ny fiainana amin'ny fomba maro noho izay azonao eritreretina.
Manambola amin'ny vitsivitsy. Tsy mila be ianao. Iray amin'ireo tranga ireo raha ny kalitao no zava-dehibe kokoa noho ny habetsahana.
4. Ny fifandraisana salama dia mampanan-karena kokoa ny fiainana.
Mikasika ny tombontsoam-pitiavana, tsy maninona ny manaiky fa tsy ny fifandraisana rehetra no haharitra, fa fahendrena kosa ny manandrana manao azy ireo ho salama sy afaka amin'ny fifandonana araka izay azo atao.
Rehefa ao anaty fifandraisana dia handany fotoana be dia be amin'ny vadinao ianao. Ny fahafinaretanao amin'izay fotoana izay dia miankina betsaka amin'ny fihetsikao, andrasan'ny , ary ny fihetsika.
Toy ny finamanana dia mitaky asa fikojakojana izy ireo. Ary ezaky ny ekipa izy ireo. Tokony ho vonona hanome vola mitovy amin'ny namanao ianao.
Amin'ny farany, mety hahita vady iray ianao. Na dia manao aza ianao dia aza atao ambanin-javatra ny manohy manao ezaka.
5. Antenaina fa hisy ny fihemorana.
Ny tsirairay dia manana fihemorana indraindray. Ny sasany manelingelina, ny hafa mandreraka. Fa ho avy izy ireo, azo antoka izany.
Ny fomba tsara indrindra dia ny manantena azy ireo, manaiky azy ireo, miasa amin'ny alalàn'izy ireo ary mandroso azy ireo.
Ny fihemorana sasany dia mety hisy vokany maharitra, saingy tsy tokony hanakivy anao na hahatonga anao hamoy fo. Na tianao na ataonao tsinontsinona izy ireo dia tsy ny olana. Ny zava-dehibe dia ny ianaranao handroso na eo aza izany.
Vitsy ny fihemorana manakana ny fandrosoanao tanteraka. Na dia mety mila lalana mihodina aza izy ireo. Raiso ny lalana mihodina. Mety hahita fitahiana tsy ampoizina mihitsy aza ianao eo am-piatrehana ny fihemorana.
6. Tsara kokoa ny fiainana raha miaina mifanaraka amin'ny anananao.
Tsy mila materialista ianao hahafantarana ny toerana manan-danja amin'ny vola amin'ny fiainana. Mila ny sasany amin'izany isika rehetra. Ary mila mitantana izay vola ananantsika rehetra isika.
Raha ny marina, arakaraky ny tsy anananao no mahabe ny fitantanana mahomby. Raha vantany vao manana vola miditra ianao dia te-hanangana teti-bola iray taratry ny vola miditra sy ny vola laninao mialoha.
Maharitra amam-bolana ny fanitsiana ny tetibola mba hahomby aminao. Fa rehefa apetrakao amin'ny toerany izany dia mifikira aminy.
Ny teti-bola dia manana fifandraisana mitovy amin'ny vola toy ny fandaharam-potoana. Ny fandaharam-potoana iray dia tsy mamorona fotoana, manampy anao amin'ny fitantanana fotoana izany. Ny teti-bola dia tsy mamorona vola, manampy anao amin'ny fitantanana ny vola anananao izany.
ahoana no hahalalana raha tsara tarehy ianao
7. Ny soatoavina fototra dia tokony ho fantatra sy hajaina.
Mihasarotra ny fiainana indraindray. Tonga amin'ny fanapahan-kevitra hendry izay mifanaraka amin'ny heverinao fa marina sy marina.
Satria mazàna mitondra entana entam-po ny fanapahan-kevitra, tena manampy izany raha fantatrao mialoha izay zava-dehibe indrindra aminao.
Izany hoe, inona ny soatoavina hazoninao mafy indrindra sy lalina indrindra?
Raha vao mandamina izay zava-dehibe aminao ianao dia ho ampy fitaovana kokoa manaova safidy rehefa nifanehatra tamin'izy ireo.
Araka ny filazan'izy ireo, 'Raha tsy miandany zavatra ianao dia hianjera amin'ny zavatra rehetra.'
8. Tsara kokoa ny fiainana rehefa mampiasa vola amin'ny fahasalamanao.
Tsy toy ny fiaranao, izay azonao ifanakalozana varotra na hady rehefa lasa tsy azo itokisana, dia raikitra amin'ny vatanao. Tsy afaka mifanakalo amin'ny vatanao ho solony ianao. Noho izany dia tsy maintsy fantarinao ny fomba fitazonana ny vatana anananao ka manompo anao mandritra ny androm-piainany manontolo.
Indray andro any dia mety ho afaka haka ampahany amin'ny vatana vaovao isika toy ny ataontsika paompin-drano na pad frein. Saingy mbola tsy tonga io andro io.
Ianaro àry izay mahatonga ny fahazarana tsara ho amin'ny fahasalamana. Avy eo ampiharo isan'andro ireo fahazarana ireo. Misaotra anao ny vatanao. Ary ny vatanao dia hanompo anao tsara amin'ny dianao manontolo.
9. Ny hetsika no mamaritra ny vokany.
Mino izany na tsia, misy olona mahita fifandraisana kely eo amin'ny fihetsik'izy ireo sy ny valiny.
Saingy misy faningana vitsivitsy, ny fifandraisan-davitra dia mivantana sy tsy azo diso.
Arakaraka ny ahaizanao ny fifandraisana akaiky eo amin'ny eritreritrao, ny safidinao ary ny zavatra ataonao… sy ny vokany dia ho tsara kokoa ianao.
Rehefa mieritreritra ny hanao zavatra ianao dia tsara ny manontany hoe inona no valiny mety hitranga raha tena ataonao izany. Na hanao ahoana izy ireo raha misafidy ny tsy hanao izany ianao.
Raha mamboly katsaka ianao dia antenao fa hiakatra ny katsaka. Raha mamafy varimbazaha ianao dia antenao fa hiakatra ny varimbazaha. Raha tsy mamafy na inona na inona ianao dia aza manantena ny hisy.
10. Ny fifandraisana tsy salama dia miteraka fiainana tsy salama.
Sarotra ny fiainana rehefa manana mpitsangatsangana namana mankahery sy manohana ary manampy maro ianao. Vao mainka sarotra kokoa izany raha avelanao hiaraka aminao amin'ny dia ataonao ny olona misy poizina.
Poizina ny poizina. Toy izany koa ny olona misy poizina. Hanadino ny herinao izy ireo, hanakivy anao, hiteraka hatezerana ao aminao, handiso fanantenana anao, ary amin'ny fomba maro be, hanasarotra ny fiainanao.
Sorohy izy ireo raha azonao atao. Raha tsy azo atao ny misoroka azy ireo dia tadiavo ny fomba hanalefahana ny fahafaha-manimba azy ireo.
11. Toetra tena sarobidy ny fifehezan-tena.
Voalaza fa ny herim-po dia mpanjakavavin'ny toetra amam-panahy, satria ny hafa rehetra dia mikoriana avy aminy.
Holazaiko fa ny faharoa farany dia ny mampiavaka ny fifehezan-tena.
Raha tsy misy fifehezan-tena dia ho tolona hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny fiainanao. Amin'ny fifehezan-tena dia azonao atao ny manatratra ireo zavatra maro irin'ny fonao.
Ny fifehezan-tena dia mifidy ny hanao izay tianao tsy mila atao mba hahazoana izay anao tena mila vokatr'izany.
Fantaro izay tianao. Fantaro avy eo izay takiana mba hananana azy. Dia ataovy tsy tapaka ireo zavatra ireo.
Hoy i Aristotle, mpandinika tsara:
Raha tsy mahay mifehy tena ianao dia halahelo foana izay mety ho nanananao na mety nisy anao.
12. Manana safidy foana ianao.
Ny iray amin'ireo fandrika mahazatra azontsika dia ny fiheverana diso fa tsy manan-tsafidy isika raha tena manao. Mety tsy ny safidy tadiavintsika izany, mety tsy ny safidy tiantsika, fa na izany aza safidy.
mangataka famantarana an'izao rehetra izao
Mandany fotoana sy hery be loatra isika noho ny safidintsika tsy manana. Ho tsara lavitra kokoa raha toa ka mampiasa ny safidintsika tsotra fotsiny manana.
Inona ny dingana manaraka tsara indrindra azonao raisina? Raiso io dingana io.
Raha toa ka tsy dia lehibe loatra io dingana io dia aza manahy. Raiso fotsiny ny dingana manaraka tsara indrindra aorian'izany. Misy foana ny dingana manaraka tsara indrindra azonao atao. Foana.
13. Vola vonjy taitra no hanampy anao hatory amin'ny alina.
Voamarikao angamba fa tsy azo vinavinaina ny fiainana. Tsy hainao mihitsy hoe inona no mety manotrika manodidina ny hantsana. Raha ny marina dia tsy azo atao ny maminavina ny ho avy, koa aza manandrana.
Aleo kosa manome vatsy ho an'ny ho avy. Fomba iray ahafahanao manao izany ny fametrahana tahirim-bola vonjy taitra.
Atombohy amin'ny fitehirizana ny isan-jaton'ny karama tsirairay ary apetraho amin'ny volanao vonjy maika. Afaka manomboka kely ianao ary mampitombo ny isan-jato rehefa mandeha ny fotoana.
Mikendry ny fandaniana iray volana amin'ny toerana azo antoka. Avy eo mikendry mandritra ny roa volana, ary miasa hatramin'ny enim-bolana. Hahatonga anao hamakivaky izany raha very asa ianao, marary, na tsy afaka miasa noho ny antony hafa.
Ny kitapom-bola vonjy taitra dia tsy vitan'ny fanomanana anao ara-bola amin'ny ho avy tsy fantatra, izany manampy anao hatory tsara amin'ny alina .
14. Ny tahotra dia tokony handrisika fa tsy handreraka.
Tsy fahavalonao ny tahotra, toy ny tsy fahombiazana. Ny tahotra dia rafitra fampitandremana fotsiny izay milaza aminao mba handray andraikitra.
Misy fomba 3 ahafahanao mamaly. Miady, manidina, na mangatsiaka. Midira amin'ny ady, mandosira ny ady, na mijoroa tsara.
Raha afaka alamina ilay raharaha dia mandray anjara na miady ianao. Raha mihoatra ny fahaizanao ny raharaha dia mandositra ianao. Raha toa ka tsy ny ady na ny fandosirana no tena itondrana ny raharaha, tazomy ny toerana misy anao ankehitriny.
Ny tsirairay amin'ireo valinteny ireo dia samy manana ny toerany…
Raha matahotra ny dinidinika momba ny asa ho avy ianao dia antso hiomanana. Raha misy rivo-doza mankeny aminao, dia fiantsoana hitodika amin'ny lalana hafa. Raha miampita arabe ianao ary misy fiara mandehandeha mamakivaky ny fiampitana, dia fiantsoana ny hatsiaka amin'izay toerana misy anao mandra-pandalovan'ny fiara.
Mianara mahita ny tahotra ho rafitra fampitandremana. Ny tahotra no fomban'ny vatanao milaza aminao fa ilaina ny hetsika. Jereo hoe inona ny hetsika tsara indrindra ary raiso izany.
Aza avela hanimba anao ny tahotra. Avelao ny tahotra hanosika anao handray ny hetsika tsara indrindra.
15. Tsara ny milaza izay tianao holazaina ary ny tianao holazaina.
Mametraha eo am-piandohan'ny fiainanao fa olona iray amin'ny teninao ianao. Izay lazainao izay tianao holazaina. Ny tianao holazaina dia izay lazainao.
Ny voalohany dia momba mazava . Ny faharoa dia momba azo itokisana .
Aza aseho ny olona hoe inona no tianao holazaina - teneno fotsiny izay tianao holazaina mazava tsara ary tsy misy ambiguity.
Ilay rahavavy kambana raha miteny mazava dia miteny azo antoka. Te hanana laza azo itokisana ianao. Azo itokisana ianao hanao izay lazainao fa hataonao. Rehefa tsy manao zavatra nolazainao fa hataonao ianao dia hihevitra ny olona rehetra fa tsy maintsy maty ianao.
16. Ny zava-dehibe dia ny mitazona ny zava-dehibe indrindra.
Tiako ny teny sy ny eritreritr'i Stephen Covey, efa nodimandry, izay nilaza fa be loatra ny olona tratran'ny “zavatra matevina.”
Marina ny azy. Hialanao io fandrika io raha mianatra mitazona ny zava-dehibe indrindra ianao.
Aza adino ny tanjonao. Aza adino ny tanjonao. Aza adino izay ezahanao hatao voalohany.
Ataovy eo alohan'izay ahitanao azy ireo zavatra manan-danja indrindra. Omeo ireo zava-dehibe ifantohanao, ny fotoanao ary ny fanoloranao tena lalina.
17. Ny fanovana izay tsy mandeha dia afaka mitondra ny fahasamihafana rehetra.
Ho gaga ianao amin'ny faharetan'ny olona manao zavatra mitovy amin'izany isan'andro sy taona isan-taona rehefa mazava toy ny lakolosy fa tsy mandeha izy.
Saingy mandroso ihany izy ireo, manao zavatra mitovy amin'ny fomba mitovy ary miaina ny valiny mitovy isaky ny mandeha.
Na tsy tsapany na hadinon'izy ireo fa raha manao izay nataonao foana ianao dia ho azonao foana ny zavatra azonao.
Raha sasatry ny manao zavatra mitovy ianao ary mahazo valiny mitovy dia manandrama manao zavatra hafa. Ovao izy io. Mikaroha. Mieritrereta ivelan'ny boaty . Makà fotoana.
Avy eo, raha manome anao valiny mitovy tsy tianao ny zavatra vaovao… dia fantatrao… manandrama zavatra hafa. Ho hitanao amin'ny farany izay mandeha. Izany no zavatra tianao hamerina.
18. Ny tsy fitenenana am-pitandremana sy mazava dia hampiala anao amin'ny fotoan-tsarotra.
Ho hitanao rehefa mandehandeha amin'ny fiainana ianao dia misy olona any izay mieritreritra fa mahalala izay mety indrindra aminao. Ka hanandrana mifehy, manodikodina ary mitaona anao hanaraka ny fandaharam-potoanan'izy ireo izy ireo.
Aza avela hataon'izy ireo izany.
Hilainao mianatra miteny tsia amin'ny olona . Fantaro fa afaka miteny tsia sy mazava ianao amin'ny fotoana iray.
Indraindray ianao mety te hanome antony amin'ny fanapahan-kevitrao. Fa tsy tokony hanan-trosa olona ianao.
Lazao fotsiny hoe: 'Tsia, tsy ho vitako izany, manana drafitra hafa aho.' Ny kasainao dia ny hipetraka ao an-trano, hijery sarimihetsika irery, ary hihinana gilasy tianao indrindra. Tsisy olana.
Tadidio fotsiny: ny fiainanao no tadiavinao fa tsy ny an'ny olon-kafa.
19. Tsy hanompo anao ny fanemorana.
Betsaka ny antony mahatonga ny olona mangataka andro. Tsy miresaka fahatarana misy tanjona aho. Tsy miresaka momba ny fanaovana any aoriana izay tsara kokoa hatao avy eo aho.
Miresaka aho manao aoriana izay tokony hatao izao.
Fantatro ny olona izay nampiasa hery lehibe fisorohana asa satria tokony ho niasa izy ireo manao ny asa .
Raha tapa-kevitra ianao fa misy zavatra tokony hatao dia ataovy. Raha tapa-kevitra ianao fa tsy tokony hatao dia tsy mangataka andro ny olana.
Ny tanjona dia ny hampitsaharana ny fametrahana eny aoriana ny tokony hatao izao.
Tsy tsara aminao. Manamafy ny asa izany. Manakana ny fandrosoanao izany. Mety ho lasa fanafoanana anao mihitsy aza.
20. Ny tsy fahombiazana no mpampianatra anao fa tsy ny fahavalonao.
Tsy azo ihodivirana ny tsy fahombiazana. Tsy fahombiazana lehibe ary tsy fahombiazana kely. Manana azy rehetra isika. Saingy tsy olana ny tsy fahombiazana raha tsy tsy ekentsika sy ianarana avy amin'izy ireo izany.
Ny tsy fahombiazana dia mpampianatra sarobidy. Saingy tokony ho mpianatra vonona sy azo ampianarina ianao.
Rehefa tsy mahomby ianao dia manontania tena raha misy fomba azonao atao mba hisorohana ny tsy fahombiazana. Avy eo dia ataovy hafa amin'ny manaraka.
Voalaza fa ny zavatra mampanaintaina kokoa noho ny mianatra avy amin'ny zavatra niainana dia ny tsy mianatra avy amin'ny zavatra niainana.
21. Handalo koa ity.
Amin'ny dianao dia misy fotoana izay tsy araka ny nantenanao ny fiainanao.
Very asa tianao. Tapitra ny fifandraisana. Misedra olana ara-pahasalamana lehibe ianao. Toa mandreraka kokoa ny fiainana noho ny fitahiana.
Normal sy mahazatra an'ny olona rehetra na aiza na aiza io.
Ny zavatra iray afaka manampy anao mandritra ny fotoana toy izany dia ny fahatsapana fa vetivety ihany izany. Lazao amin'ny tenanao fa tapitra ny zava-drehetra ary izany koa dia handalo.
Lazao hoe: 'Tsy maninona izany, tsy anio ihany.'
Hevero ho toy ny lalan-dàlana lavitra amin'ny làlana halehanao izany. Toa tsy ho tapitra intsony ny lalana mihodina. Saingy mifarana amin'ny farany, miverina amin'ny làlam-be ianao, ary manohy ny dianao.
Aza mifantoka be loatra amin'ny toe-javatra iainanao. Aza mandany fotoana be loatra amin'ny fisainana ny zavatra tsara taloha. Mianara manaiky izay tsy azonao ovaina.
Nandalo ve ianao?
Eny, any no anananao. Zavatra 21 tokony ho fantatry ny tsirairay momba ny fiainana. Raha miezaka mamakivaky ny tsirairay ianao dia ho vonona amin'ny fanadinana farany.
Mandritra izany fotoana izany dia azonao atao ny misafidy iray hiasa fotsiny. Tsy misy dikany ny hakiviana. Safidio fotsiny ny iray amin'ireo 21 ary mifantoha mandritra ny fotoana fohy. Tsy hahafehy izany eo noho eo ianao. Fa raha mifantoka sy manokana ny herinao ianao amin'izany, amin'ny farany.
ny fomba hampifaliana ny vadinao aorian'ny ady
fahasamihafana eo amin'ny fanaovana fitiavana sy ny fanaovana firaisana
ahoana no ilazako amin'ny olona tiako izy ireo
mandeha haingana loatra ny sipako